China Mobile Germ-egbu Robots PulseIn-D rụpụta na Factory | Emeela
Nka na ụzụ teknụzụ nke Pulse Ultraviolet Sterilizer
1 Pulse xenon oriọna
1.1 Igwe xenon wuru n'ime ya na-eme ka ọkụ na-enwu ọkụ
1.2 Acha-emitting aak ogologo ≥ 37.5 cm
1.3 Nkesa oghere Electro ≥ 3.5 cm
1.4 Ugboro ole na-egbuke egbuke ≥ 2 Hz; voltaji n'ofe electrode ≥ 3000V
1.5 Oriọna ọkụ ọkụ na-enwu ọkụ life 3 nde ugboro
2 High voltage orùrù capacitor
2.1 Oge na ụgwọ ugboro million 50 nde
2.2 Sistemu na - achọpụta ihe na - akpaghị aka ma na - echetara gị ozigbo ka emechie ikike gị
3 Ike sistemụ
3.1 Volta mbata: 220V / 50HZ
3.2 Ike ntinye ≥1200W
4 Ihe na-akpata nje
▲ 4.1 Ihe disinfection bụ ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ juputara na ọkụ ọkụ ultraviolet na band 200nm-315nm
▲ 4.2 Ike nke ọkụ ultraviolet pulsed na ogologo ntụgharị nke 250nm-280nm kwesịrị ịbụ> 62000uw / ​​cm2 na 1 mita (akụkọ nyocha enyere)
5 Disinfection mmetụta (nye ule akụkọ)
5.1 Ọnwụ nke MRSA n'elu ihe ahụ na 3 mita mgbe nkeji 5 nke irradiation bụ ≥ 99.9%
5.2 Ọnwụ nke nje bacteria dị n'elu mita atọ mgbe nkeji 5 nke irradiation ≥ 99.0%
5.3 Ọnụego igbu egbu nke Acinetobacter baumannii ≥ 99.9% na 3 mita mgbe irradiation maka nkeji 5
6.1 Enwere ike ịtọ oge disinfection na minit 5, na radius disinfection bụ meters 3 mita, nke edobere dịka ihe a ga-eji chụpụ ya na oke ụlọ ahụ.
7. Smart oriọna-eweli akụkụ
▲ 7.1 Oriọna ahụ ga-ebili na-akpaghị aka wee daa dịka ntuziaka nke usoro na ọnọdụ ọrụ, na ogo ọrụ ya bụ -165cm.
7.2 Oriọna ndụ onwe-ule, sistemụ na-echetara onwe ya iji dochie oriọna nwụrụ anwụ
7.3 mpụga nke oriọna oriọna ahụ na-anabata iko dị quartz dị elu, perinability disinfection na sterilization, bepụ 200NM
A na-ebute ọkụ na-eso ya iji zere ọgbọ ozone dị anya na tube oriọna.
▲ 7.4 A na-etinye nzacha ozone na ụgbụ ozone n'elu tubulu oriọna ahụ iji mebie ma mezie ozone ahụ ewepụtara na mpaghara dị nso na oriọna oriọna ahụ; na ozone ịta mgbe disinfection na nwoke ịga ụlọ ọgwụ bụ <0.08mg / m³ (ule ule nyere)
8. The dị mirror elu na-guzobere a * Tụkwasị na-egosi na elu site ebu na-amụba ume nke ìhè radiated n'èzí na-abawanye
9. Usoro ahụ dị njikere iji: iji pulse flicker wepụta ike oyi siri ike, enweghị mmebi nke akụrụngwa ọkụ, plastik metal, ákwà mgbochi mgbidi na gburugburu ndị ọzọ.
10. 7 inch smart capacitive ihuenyo mmetụ
10.1 Sọftụwia nke ihuenyo mmetụ nwere ọrụ nke ichetara ngwụsị nke disinfection, bulie oriọna ahụ, wedata oriọna ahụ, malite ịmị ọkụ, kwụsị ikpu ọkụ, nhazi usoro, ntọala ntọala, wdg.
10.2 Sọftụwia nke ihuenyo mmetụ nwere ọrụ njikwa ọgụgụ isi, na-edekọ data dị mkpa nke disinfection ọ bụla, na-akpaghị aka.
Usoro ahụ na-anakọta data nke usoro nke usoro ọ bụla ma nwee ọrụ mkpu na-akpaghị aka.
10.3 Igwe ntanetị dị larịị nke anụ ọhịa ahụ 7-inch nwere otu ọrụ dịka ihuenyo mmetụ ndị ọbịa;
11. zụ igwe dum dị ≤ 65DB
12. Net nha nke igwe bụ 65KG, na nkwakọ ngwaahịa bụ 100KG.
13. Emeputa agafeela asambodo ISO9001
▲ 14. Ngwaahịa ngwaahịa agafeela asambodo CE; ngwaahịa a nwere patent akwụkwọ; ngwaahịa a agafeela akụkọ ọchụchọ ọhụrụ.
▲ 15. Ime ụlọ> hospitalslọ ọgwụ iri dị n'elu klaasị III etinyela ikike.
16. Igwe nha: 55cm n'obosara, 72cm ogologo, 115cm elu;
17. Oge ikike maka onye ọbịa na xenon lamp tube: ọnwa iri na abụọ.
Usoro PulseIn-D nke pulisen xenon UV sterilizer (roboticidal robots) mepụtara ọkụ dị iche iche siri ike (gụnyere ọkụ ọkụ ultraviolet zuru oke, ọkachasị 200nm-320nm) site na oriọna xenon enyi na gburugburu ebe obibi, ma na-agabiga mbara igwe, ike dị elu. pulsed ultraviolet light Irradiation na-ebibi DNA ma ọ bụ RNA microbial iji mebie microbes ma ọ bụ microbial regeneration, iji nweta ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma nke nje, ero, nje, spores na ndị ọzọ pathogens. Ngwaahịa a na-enye usoro ọgwụgwọ na ọgwụ disinfection, nke nwere ike belata oke microbial na gburugburu ụlọ ọgwụ na ahụike ma belata ọnụego ọrịa ụlọ ọgwụ (HAI) nke ụlọ ọgwụ na ahụike.
Ngwongwo xenon UV a na - enweta (roboticidal robots) nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara nwere ike belata oke microbial na gburugburu ụlọ ọrụ ahụike na ahụike site na igbu ngwa ngwa dị ka nje, fungi, bacteria, na spores. Enwere ike itinye ya n'ọrụ na ụlọ ọrụ ahụike na ọkwa niile. Ọ nwere ike belata ọnụego ọrịa ụlọ ọgwụ (HAIs) nke ụlọ ọgwụ na ọkwa niile site na ịgba ọgwụ mgbochi na disinfection nke ihe na ikuku.
Sterilization mmetụta nke ngwaahịa
Egosipụtara mmetụta bactericidal dị na tebụl na-esonụ:
Mmetụta ụlọ ọgwụ
Methicillin na-eguzogide Staphylococcus aureus (MRSA)
Vancomycin na-eguzogide ọgwụ enterococci (VRE)
Pulsed xenon oriọna 1. Wụnye xenon oriọna tube na-emepụta pulsed ufiop ìhè 2. Light-emitting aak ogologo ≥ 37.5 cm 3. Electrode spacing ≥ 3.5 cm 4. Mgba ọkụ ugboro ≥ 2 Hz; voltaji n'ofe electrode ≥ 3000V 5. Oriọna ọkụ ọkụ na-enwu ọkụ ≥ 3 ugboro nde
High voltaji ihapu capacitor 1 .Charge na discharge times ≥ 50 million times 2. Sistemu na-akpaghị aka na-achọpụta ọnọdụ nke ihapu capacitor na-akpaghị aka na-echetara gị iji dochie kubie ume kuapu capacitor.
Ike sistemụ 1.put voltaji: 220V / 50HZ 2.Input ike ≥1200W
Ihe na-akpata nje 1 .Ihe disinfection bụ ìhè na-efegharị efegharị zuru oke, gụnyere ultraviolet na 200nm-315nm band 2. Ike nke ụzarị ikuku ultraviolet nwere ogologo nke 250nm-280nm kwesịrị ịbụ> 62000uw / ​​cm2 na 1 mita (akụkọ nyocha enyere) Mmetụta disinfection (nye akụkọ nyocha) Ọnwụ nke nje bacteria dị n'elu mita atọ mgbe nkeji 5 nke irradiation ≥ 99.0%
7 inch smart capacitive ihuenyo mmetụ
Onye nrụpụta ahụ agafeela asambodo ISO9001
Thedị ngwaahịa ahụ agafeela asambodo CE; ngwaahịa a nwere patent akwụkwọ; ngwaahịa a agafeela akụkọ ọchụchọ ọhụrụ.
1. Ndenye disinfection: Usoro ngwa ngwa disinfection na ohere ụfọdụ nwere ike igbu Ebola, C.diff, MRSA, CRE na nje ndị ọzọ na nje na-eguzogide ọgwụ
2. Ọrụ ọrụ dị elu: Nkeji 5 nwere ike mezue ọrụ disinfection nke 25 m²; 30 nkeji nwere ike idozi 150 m²;
3. Ọrụ dị mfe: ọ dịghị mkpa maka ọrụ ọkachamara, ndị nọọsụ, ndị nọọsụ na ndị ọrụ nhicha nwere ike ịrụ ọrụ mgbe ọzụzụ gasịrị iji mezue igbu mmadụ;
4. Enweghị mmetụta ọ bụla: enweghị mmetọ ọ bụla, ọ dịghị ọgwụ mmiri ọgwụ;
5. Enweghị mmebi: A na-eji teknụzụ ọkụ oyi eme ihe iji mebie arụmọrụ na elu nke akụrụngwa ahụike; a na-ekewa igwe mmadu n'oge eji ya eme ihe, a na-ejikwa eriri ikuku ikuku iji zere mmebi nke aru mmadu;
6. Mma: njikere iji, disinfect n'oge ọ bụla.
55cm n'obosara, 72cm ogologo, 115cm elu
Akwụkwọ ikike oge nke usu na xenon oriọna tube
Ọnwa iri na abụọ
enwere ike ịtọ nkeji na 5, na disinfection radius bụ meters 3 mita, nke edobere dịka ihe si
bu ogwu ogwu na ime ulo ahu
Ihe ngosi sistemụ
Mgbe akụrụngwa ahụ na-agagharị na ụgbọelu, gbalịa ịkwanye akụrụngwa ahụ ma ghara ịdọrọ akụrụngwa ahụ, dị ka egosiri na ọnụ ọgụgụ dị n'okpuru:
njehie ije Ọgụgụ
Akụrụngwa na-agagharị na ụgbọelu. Mgbe enwere nnukwu uzo ma ọ bụ mgbagharị, ọ ga-aga n'ihu na pedal ụkwụ, nke mere na akụrụngwa na-agabiga na uzo, na enweghị ike ịdọrọ aka ahụ. Dị ka e gosiri n'okpuru:
njehie ije nke uzo
nri ije nke uzo
Mgbe akụrụngwa gafere na mkpọda, ekwesiri ịmara na mgbe ị na-ebugharị ngwaọrụ ahụ, ị ​​ga-eguzo n'ihu ngwaọrụ ahụ ma dọpụta ngwaọrụ ahụ gbagoro, akụkụ tilt nke ngwaọrụ ahụ enweghị ike ịgafe ogo 30. Dị ka e gosiri n'okpuru:
Ntị: Cheta! Akwanyela ngwá ọrụ n'azụ ya mgbe ị gbagoro na mkpọda ahụ!
Mgbe akụrụngwa gafere n'akụkụ elu na nke ala, achọrọ ka ọtụtụ mmadụ bulie ngwaọrụ ahụ, ma machibidoro ịmanye ngwaọrụ ahụ n'ike n'elu nzọụkwụ ahụ, dị ka egosiri n'okpuru:
Okwu nke usoro irradiation
Nke gara aga: AI Germ-egbu Robots AIStrike
Osote: Ekwentị mkpanaka na-ehicha ikuku AirH-Y600H